Home समाचार विजय शाहीले यसरि उल्लु बनाए, आफ्नो झुटको पर्दाफास भएपछि भागे (भिडियो हेर्नुस्)
फेसबुक र युटुब प्रयोगकर्ताले मेमोरी किंग भन्ने बितिकै विजय शाहीलाई नै चिन्छन् । सायद कनै पनि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता छैनन् होला जसले उनको नाम सुनेको छैनन् होला । यति बेला उनले निकै नै तहल्का मच्चाइरहेका छन् । उनका भिडियोहरु युटुब तथा फेसबुकमा निकै नै भाइरल भइरहेका छन् ।
उनले आफ्नो अतभुत स्मरण शक्तिको प्रतिभा र क्षमता यसरी देखाएका थिएकी, जसले गर्दा धेरैको ध्यान उनीतिर तानिरहेको छ । धेरै ब्यक्तिहरुले उनको प्रतिभाको आधारमा अनेक मिम बनाइरहेका छन् चाहे उनलाई प्रोत्साहन गरेर होस् या troll बनाएर होस, मानिसहरुले उनीमाथि भिडियो बनाइरहेका छन् । अनि उनले देखाएको अतभुत स्मरण शक्तिको प्रतिभा र क्षमताका कारण मानिसहरुमा आश्चर्य मात्र छैनन्, केहीले त उनको यो कार्य झुटो हो भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
हेर्नुहोस प्रश्नको सामना गर्न नसकेर यसरि भागेका थिए विजय शाही : ﻿﻿
आखिर कसरी विजय शाही एकाएक चर्चामा आए त ???
गत वर्ष माघको कुरा हो, कालीकोटका विजय शाहीले मेमोरी किङ विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गरेका थिए । विजयले एक मिनेटमा अगाडि र पछाडिबाट ७० शब्द स्मरण गरेपछि भारतका प्रतियोगिलाई पछि पार्दै विश्व कीर्तिमान कायम गरेका थिए ।
यसभन्दा अगाडि स्मरण शक्तिमा विश्व रेकर्ड अर्पण शर्माले राखेका थिए । उनले एक मिनेटमा ४२ वटा शब्द बोलेका थिए भने अर्पणलाई पछि पार्ने भारतका सागर भुजीलाई विजय शाहीले हराएर विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि नासाले बोलाएको छ भनेर उनले बताउदै आइरहेका छन् । त्यसपछि उनको नाम एकाएक चर्चामा आउन थाल्यो ।
Previous articleकुलमान घिसिङलाई हटाए रै छाड्ने भए, यस्तो छ डरलाग्दो चलखेल
Next articleआजदेखी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी ! के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने
अनामनगरमा छुरा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरिएको छ ।
काठमाडौंको नयाँबजारमा किरियापुत्री बसेको घरमा ग्याँस सिलिन्डर बिस्फोट, ११ घाइते, ४ को अवस्था गम्भीर